–दुई चम्चा ताजा एलोभेरा जेल
–एक गिलास पानी
–एलोभेरा जेललाई पानीमा राम्रोसँग मिसाएर पिउने ।
कतिपटक प्रयोग गर्ने ?
– तपाई दिनभरमा एक देखि दुई गिलास पिउन सक्नुहुन्छ ।
कसरी फाइदा पुर्याउँछ ?
– पेटमा ग्यास भरिने गर्दा जलन हुन्छ, यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा उत्तम उपाय एलोभेरा जेल रहेको छ । एलोभेरामा एन्टीइम्फ्लेमेटरी गुण रहेको हुन्छ । जसले पेटमा हुने ग्यास भरिएर पेट पोल्नबाट बचाउँछ । यसका साथै यसले एन्टीसेप्टीक एजेन्टी पनि रहेको छ, जसको काम संक्रमण फैलाउने ब्याक्टेरियालाई मार्ने गर्छ । ग्यासको समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि एकपटक यो उपाय अवश्य प्रयोग गर्नुहोला ।